Donald Trump: How do I make him go away? | Government Affairs
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Raharaham-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao momba ny zon'olombelona • Other • Vaovao momba ny fizahantany • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Travel Wire News • News News
Donald Trump: Ahoana no hataoko mandroaka azy?
Enga anie 8, 2020
voatifitra sary 2020 05 07 ao amin'ny 14 28 33
Home » Lahatsoratra » Vaovao momba ny fizahan-tany an'ny governemanta sy ny sekolim-panjakana » Donald Trump: Ahoana no hataoko mandroaka azy?
Efa ho 4 taona izao Ilay Donald nandao an'i Manhattan ary nipetraka tany Washington, DC. Amin'ny maha-New Yorker azy sy mpamolavola trano, dia tsy nisy fiatraikany tamin'ny fiainako. Tokony hiaiky aho fa nampiasa ny fitsoahany trano ho ohatra amin'ny fifanakalozana raharaham-barotra iraisam-pirenena, saingy- ankoatry ny fialamboly ireo mpianatry ny oniversite dia tsy liana tamin'ny Ilay Donald.
Izy (tsindraindray) dia nalaina sary tao amin'ny NY Post, ny NY Daily News, ary nanao fisehoan-kevitry ny vahiny tamin'ny fandaharana lahateny tamin'ny fahitalavitra (talohan'ny nahazoany gig manokana), fa - ny ankamaroan'ireo fisehoana ireo dia misy ifandraisany amin'ireo vehivavy marobe tamin'ny fiainany; tsy nitafatafa tamina manam-pahaizana momba ny zavatra mety ho vokany izy.
Ary avy eo, amin'ny fihodinan'ny lahatra, Ilay Donald lasa POTUS. Gaga ny olona fantatro (nahalala azy) fa tsy taitra fa nifindra avy tao amin'ny Trump Towers ho any amin'ny White House izy. Ny mpanolo-tsaina azy dia nanana zavatra tsara holazaina momba azy, ary nanana ny fahaizany mitady vola ho an'ny tenany izy nefa tsy nanangona vola tamin'ny volany manokana. Izany dia tamin'izany fotoana izany dia noheverina ho endrika kanto fa tsy fanamelohana ny fihetsiny.
Ny sasany tamin'ny asa tsara nataony dia nanome laza azy (izany hoe ny famitana ny volan-dranomandry ao Central Park araka ny tetibola) raha ny ezaka nataony teo an-toerana (izany hoe ny hosoka nataon'ny anjerimanontolo Trump) dia kely noho ny fankasitrahana. Tsy latsa-danja amin'izany, matetika izy no hita tamin'ny sary niaraka tamin'ny mogul fananan-trano nitifitra, karazana ara-bola Wall Street ary banky iraisam-pirenena… Ary tsy nisy na inona na inona izay “nampihozongozona ny tontoloko.”
Ary ankehitriny, na aiza na aiza no itodihako, izay rehetra ataoko, dia niditra an-tsehatra avy tao amin'ny The Donald. Nihidy tao amin'ny efitranoko (ambanin'ny quarantine) aho hatramin'ny volana febroary (sa volana martsa teo?). Very lanja ny fotoana satria tsy tany ivelan'ny tranoko nandritra ny volana maro aho. Sambatra aho mahita voninkazo, hazo, ahitra ary kianja filalaovana tenisy avy eo am-baravarankely, fa, ankoatra izany - tsy nifindra avy tao amin'ny efitrefitry ny trano fonenako aho (nanisy fihenam-bidy kely ny dia tao amin'ny ascenseur mba hakana ny entako avy amin'ny Key Foods, Amazon sy Walmart) ary ny fitsangantsanganana isan-kerinandro amin'ny fanasan-damba - asio tsara ny diako mba tsy hizarako ny toerana fanasan-damba na ny ascenseur amin'ny mpifanila vodirindrina amiko, na (ho very ny eritreritra) mpitsidika avy any "ivelany" izao tontolo izao bitika kely . Amin'ny maha mpandeha an-tany ahy dia lasa kely dia kely ny fiainako ary fisaorana an'i The Donald daholo izany.
Tsy maloka ny rehetra. Misaotra an-tranomaizina nandritra ny fotoanan'ny areti-mandringana (nodomina ho Ilay Donald), Nampahafantarina ahy ny biraon'ny Birao Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (WHO). Raha ny tena izy dia tsy tokony nametraka finoana be tamin'ny fahatongavan'ity masoivohon'ny Firenena Mikambana ity aho. Araka ny nasongadin'ny mpanatanteraka iray an'ny WHO (tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ZOOM farany teo), ireo olona miasa ho an'ny OMS dia tsy ireo olona mifehy ny hetsika; Ny mpiasan'ny WHO dia tarihin'ny Mpikambana izay mandoa vola be dia be hiditra ao amin'ny fikambanana.
Ilay Donald marina raha nilaza izy fa i Etazonia no mpandray anjara lehibe indrindra amin'ny OMS; ny USA dia manapaka ny vola $ 116M isan-taona, na manodidina ny 24 isanjaton'ny tetibolan'ny fikambanana iray manontolo. Mandoa ny vola faharoa indroa amin'ny mpikambana i China amin'ny $ 57M, na 12 isanjaton'ny totalin'ny fikambanana fotsiny. Ny ankamaroan'ny firenena dia mandoa vola ambany noho ny Etazonia ary firenena 13 ihany no mandoa $ 10 M miaraka amin'ny firenena 44 mandoa latsaky ny $ 1M isan-taona hanohanana ny WHO. Ny fanontaniana lehibe hodinihina dia ny hoe mahazo vola be ve i Etazonia?
IZA no nahalala inona / rahoviana?
Ny WHO dia mety ho (tokony ho?) Mavitrika kokoa amin'ny famahana ny areti-mifindra Wuhan. Toa be dia be ny olona mandefa andraikitra amin'ny hafa, saingy - farany, ny tompon'andraikitra ao amin'ny WHO dia tsy naka telefaona na nandefa mailaka tany Etazonia ary, farafaharatsiny mba hanomezana ireo matihanina momba ny fahasalamana sy ny mpahay siansa "Fampitandremana." Ny mpitarika WHO dia nilaza fa miara-miasa amin'ny mpahay siansa sy ny mpitsabo amin'ny fahasalamana manerantany izy ireo. Raha heverina fa marina izany, maninona no moana izy ireo na dia ny «fitsapana fofona» faran'izay kely aza, dia nanolotra, farafaharatsiny, ny "mety" olana mitombo.
Dr. Daniel Lucey, manam-pahaizana momba ny areti-mifindra ao amin'ny Oniversite Georgetown dia nahita fa na dia ny marary voalohany tao Wuhan aza dia voan'ny aretina tamin'ny 1 Desambra 2019, dia azo inoana fa tamin'ny volana novambra no nisehoan'ny aretin'olombelona, ​​satria toa nisy fe-potoana nampidirina ilay virus. hatramin'ny 14 andro. Ity marary ity dia mety nanaparitaka izany tamin'ny hafa talohan'ny nanolorany tena tamin'ny ekipa mpitsabo. Tranga fanampiny no notaterina tamin'ny 12 desambra 2019. Tamin'ny 30 Desambra 2019, namoaka torolàlana ho an'ny hopitaly, tobim-pitsaboana ary tobim-pitsaboana hafa ny komisiona ara-pahasalamana Wuhan mandrara ny famoahana vaovao momba ny fitsaboana ilay aretina vaovao (China Media Project).
Dr. Li Winliang sy ireo mpitsabo hafa dia niahiahy tamin'ity viriosy vaovao ity ary tamin'ny 20 Desambra 2019, nampitandrina ny dokotera ny polisy (momba ny vondrona chat ao aminy an-tserasera) - na ny firesahana tranga fito vaovao aza dia tsia. Andro vitsy taty aoriana, ny 3 Janoary 2020, noteren'ny polisy i Li hanasonia taratasy milaza fa nanaparitaka, “kabary tsy marina” izy noho ny fampandrenesana ireo mpiara-miasa momba ilay virus (izay nahafatesany).
Ary farany, tamin'ny 31 Desambra 2019, nampahafantatra tamin'ny OMS ny manampahefana sinoa fa nahita karazana coronavirus vaovao izy ireo. Tamin'ny 7 Janoary 2020 dia natao ny fitsapana ny laboratoara amin'ireo tranga ahiahiana rehetra ao Shina. Tamin'ny 11/12 janoary 2020, Nahazo fampahalalana fanampiny avy amin'ny Vaomieran'ny fahasalamana nasionaly ao Shina momba ny olana ny WHO. Ny Filoham-pirenena Xi Jinping dia nanao kabary tamin'ny 3 Febroary 2020 (natonta indray avy amin'ny Qiushi, gazety iray volana), izay nilazany fa, "Namoaka fitakiana aho nandritra ny fivorian'ny Komity Mijoro Politburo tamin'ny 7 Janoary mba hahitana asa hifehezana ny valanaretina." Mazava fa fantany ilay olana tamin'io andro io ary angamba andro vitsivitsy talohan'izay.
Tamin'ny 20 Janoary 2020, ny marary COVID 19 voalohany dia fantatra tany Etazonia sy Korea. Tamin'ny 11 martsa 2020 vao nanambara ny WHO fa areti-mandringana ny COVID 19, mamantatra tranga 118,000 any amin'ny firenena sy faritany 110 manerantany ary mety hitera-doza.
Tsiambaratelo fananana any Hollywood, fa tsy amin'ny siansa
Ny tompon'andraikitra ao amin'ny WHO dia afaka niresaka tamin'ny mpahay siansa mpitarika, mpampianatra ary olon-kafa eo an-kianja handinihana ny zavatra hitany - na dia tsy tena vonona hanao fanambarana momba ny areti-mandringana aza izy ireo. Rehefa ianao no USA ary mpandray anjara lehibe amin'ny fikambanana iray dia misy ny fanantenana fa ianao no ho voalohany hampandrenesina amin'ny tranga mety ho vonjy taitra. Na dia tsy liana aza ny POTUS dia misy ireo "influencer" eran'i Etazonia izay mety ho (mety) nanomboka nanetsika ny fanjaitra tamina fandraisana andraikitra (eritrereto ny fitarihan'i Korea).
Fa maninona no tara sy / na manafina? Ny fikarohana sasany dia milaza fa misy fifandraisana mihoatra ny maha matihanina eo amin'ny fitarihana ny OMS sy ny sinoa, na angamba ny lehilahy sy ny vehivavy eo an-tampon'ny WHO dia sahirana loatra tamin'ny fiezahana hiaro ny lazany ary / na nisy loza hafa nitady azy ireo.
Na inona na inona antony (fahatongavan) ny fahatarana sy ny fianjeran'ny toekarena manerantany manaraka dia izao no fotoana hanaovana an'i The Donald handeha. Tsy amin'ny alàlan'ny ombiasy amin'ny majia, ary tsy amin'ny alàlan'ny vavaky ny Mpisoronabe, fa amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo kofehin'ny demokrasia izay mbola simba - ary izany dia amin'ny alàlan'ny VOTE!
Betsaka ny olona manana andraikitra lehibe amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra no maniry ny hanaisotra ny fahafahan'ny USA mifidy. Ireo olona ireo dia hampiasa ny fotoana rehetra hisakanana ny olom-pirenena amerikana tsy haneho ny heviny sy ny heviny momba izay tokony hitarika azy ireo. Ireo olona tena ratsy fanahy ireo dia mampihetsi-po amin'ny fifidianana (manakatona ny toerana fandatsaham-bato akaiky, mangataka antontan-taratasy marobe), mampidi-doza ny mifidy (hadino ny COVID 19 sy ny fahaizany mamakivaky toerana sy fotoana), mahatonga ny olom-pirenena hijoro lava be ora amin'ny masoandro mafana hametrahana ny vatom-pifidianany, ary minia tsy miraharaha ireo mpifidy noho ny firazanany, ny fivavahany na ny kaody zip.
Afaka manao Ilay Donald mandehana - fa tsy ho mora izany.